Posted by Tranquillus | Agoosto 25, 2021 | Shabakada
Miyaad rabtaa inaad si dhaqso leh u horumariso luuqadda aad higsanayso? Isticmaal sawirro maskaxeed si wax ku ool ah kaa caawin kara inaad gaarto yoolkaaga. Sidee habkani u shaqeeyaa? Lisa Joy, mid ka mid ah macallimiinteena Ingiriisiga ee MosaLingua oo iyadu baratay luqadda, ayaa ku siineysa afar dariiqo oo aad ku abuurto sawirro maskaxeed oo wax ku ool ah oo kaa caawin kara hagaajinta xusuustaada iyo barashada luqadda.
Isticmaal sawirro maskaxeed si aad u horumariso luqadda aad higsaneyso
Ku dhawaad ​​65% dadweynaha ayaa ah bartayaal aragga, taas oo macnaheedu yahay inay jirto fursad wanaagsan oo aad tahay. Runtii, maskaxdeenu waxay u egtahay inay shaqayso iyagoo noo soo dira sawirro.
Halkan waxaa ah imtixaan degdeg ah oo si fiican loo fahmi karo! Ka fikir safarkii ugu dambeeyay ee aad ku tagtay dukaanka weyn oo isku day inaad xasuusato faahfaahin badan intii suurtogal ah. Ka fikir waxyaabo gaar ah sida alaabtii aad soo iibsatay, haddii aad soo qaadatay dambiil ama gaadhi wax iibsi, haddii aad keligaa joogtay ama qof la joogtay, sidaad u bixisay dhammaadka… Ha ka labalabeyn inaad indhahaaga xirto haddii taasi kugu habboon tahay.
Sideed u xasuusataa dhacdadan madaxaaga? Ma waxay ahayd qaab erayo, codad
Sidee loo adeegsadaa sawirrada maskaxda si aad si fiican u xafiddo? - VIDEO Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Tababarka daryeelka palliative
horeQaaciidooyinka edeb leh ee dhammaadka iimaylka ku jira xaalad gaar ah
socdaQaate kasta wuxuu leeyahay qaacido edeb leh oo habboon!